ကိုယ်ဝန် / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာနှောင့်နှေးရာသီဖြစ်ပေါ်တွေ့သည့်အခါကိုယ်ဝန်အကြောင်းကိုလစဉ်နှောင့်နှေးစေရန်ကိုယ်ဝန်၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သံသယများမရှိခြင်းအဘို့စမ်းသပ်ပြုမိ။ သို့သော်ထက်အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်သစ်တစ်ခုအသက်တာ၏ပေါ်ပေါက်ရေးကြောင်းဆုံးဖြတ်ရသောအပေါ်ခိုင်ခိုင်လုံလုံ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ပျို့နှင့်ထိနမိဒ္ဓ။ ပျို့၏ပုံစံကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွါးအတွက်ကိုယ်၌နံနက်အီမှာတော့ဒီအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် ...
ရာသီမတိုင်မီကိုယ်ဝန်၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာ Read more »
ကိုယ်ဝန်, ကျန်းမာခြင်း, မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးသက်ရှိများ၏ကြီးမားသောပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ထို့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားအောင်အတွက်ကိုယ်ဝန်အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုးမြှင့်အတူ။ တစ်ဖွဲ့လုံးဟာ dentition အတွက်၎င်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းရှိပါတယ်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ဤသည်ဆိုးရွားစွာကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမနှင့်သန္ဓေသားအဖြစ် dentition စနစ်အားထိခိုက်နိုင်သောလူအပေါင်းတို့၏တစ်ဦးနားလည်မှုလိုအပ်သည်။ မကောင်းတဲ့သွားများ - ဤကွီးစှာသောဘေးဥပဒ်သည်အရာအတွက် ...
ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအံသွားကိုလိုက်နာဖို့ကိုဘယ်လို Read more »
ကိုယ်ဝန်, မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အချို့အသက်နီးပါးတိုင်းမိန်းမကိုယ်ဝန်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာသင်ယူတော်မူပြီးမှ, သတင်းအမှီ ပြု. ရွှင်လန်းသောအပြုံးကြိုဆိုသည်။ မျှော်လင့်မိ၏ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်ကသူတို့အခွအေနေ သိ. နှစ်သက်ရာ၌တည်ရှိ၏။ သူမသည်နိုးထမိခင်ခံစားချက်များကိုနားထောင်ပြီး, ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများကအကြောင်းပြောထားသည်နှင့်ရုတ်တရက်တစ်ဦးချွန်ထက်ပျို့ချင် feeling, ပထမဦးဆုံးအင်္ကျီအဘို့စတိုးဆိုင်သို့ရောက်ကြ၏။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသဘောပေါက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဒါ ...
ကိုယ်ဝန်လေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Read more »
ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့က၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှု၏သင့် Self-အကဲဖြတ်ဘို့ကိုယ်ဝန်၏ပထမဦးဆုံးလက္ခဏာတွေအားဖြင့်သင်တို့ကိုကြှမျးဝငျပါလိမ့်မယ်။ အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာများသင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုဆက်သွယ်၏ပျမ်းမျှနှိုင်းယှဉ်သင်သည်တိကျစွာကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းသပ်ဖို့ထင်နိုင်စွမ်းကိုငါပေးမည်။ ဇာစ်မြစ်၏ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာမှနှင့်နှိုင်းယှဉ်မရနိုငျသညျ, ကသေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏလူတွေလျှင်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းထင် ...
ဖြစ်နိုင်သမျှစောစောအဆင့်မှာကိုယ်ဝန်အခွင့်အလမ်းစစ်ဆေးပါ။ Read more »
ကျွန်မကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွားကိုကြောက်တာပါ, ဒါကြောင့် ok ပါသလဲ ဘယ်လိုကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွားမကြောက်ရ: စိတ်ပညာရှင်နှင့်ဆရာဝန်များ၏အကြံပေးချက်ကို
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့်ကလေးမွေးဖွား - အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အသက်တာကိုးလအတွင်းအဓိကဖြစ်ရပ်သူမကကစိုးရိမျတကလေးမွေးဖွား၏အံ့ဖွယ်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ, ပျော်ရွှင်စွာသူမ၏နားထောင်ခြင်း, တစ်ဦးအသက်တာသစ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးဘယ်လိုစောင့်ကြည့်အံ့သြနေသည်။ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်, မျှော်လင့်ချက်, သူ့ရင်ဘတ်အစအနနှိပ်ဖို့စိတ်မရှည်လိုဆန္ဒ - ထိုသို့သောခံစားချက်တွေကိုမျှော်လင့်မိ၏အပြည့်အဝရက်အတွင်းနှင့်ညဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်မကြာခဏသန့်စင်သောလည်းရွှင်လန်းမျှော်လင့်ထားနှင့်အတူ ...
ကျွန်မကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွားကိုကြောက်တာပါ, ဒါကြောင့် ok ပါသလဲ ဘယ်လိုကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွားမကြောက်ရ: စိတ်ပညာရှင်နှင့်ဆရာဝန်များ၏အကြံပေးချက်ကို Read more »
30 ပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်: လိုချင်သောအဖြစ်မှန်အသွင်ပြောင်း။ ဘယ်လိုအသက်အရွယ်အောင်မြင်မှု 30 နှစ်အကြာကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ, လိမ့်မည်
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း 30 »အဘို့အသက် nulliparous အမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေအတွက်ကို "နှစ်ဆ။ အနည်းငယ်တစ်ဒါဇင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမတူဘဲယခုပထမဦးဆုံးကိုယ်ဝန်နှင့်အတူ 40 နှစ်အတွင်းစံနှငျ့အမြိုးသမီးစဉ်းစားသည်။ အဘယ်အရာကိုနားလည်ရန်အသက်အရွယ်ထိုသို့သောပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေအံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအကြီးအတိုးတက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, ယခုအခါယခင်ကမြုံထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်သူမိန်းမ, တဦးတည်းကလေးသည်ထက် ပို. ပင်ရှိနိုင်သည်။ ဆရာဝန်များ ...
30 ပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်: လိုချင်သောအဖြစ်မှန်အသွင်ပြောင်း။ ဘယ်လိုအသက်အရွယ်အောင်မြင်မှု 30 နှစ်အကြာကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ, လိမ့်မည် Read more »
ကိုယ်ဝန်နှင့်မှားယွင်းသောစဉ်အတွင်းအစစ်အမှန်ကျုံ့ခွဲခြားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? nulliparous အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကျုံ့ Features
အချိန်ကိုကလေးအားဖြင့်အနာဂတ်မိခင်အများစုအပြည့်အဝလက်နက်ပါဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဆေးဝါးမှတ်တမ်းများ check လုပ်ထားသည်, မိမိအမှုအရာများနှင့်အလွန်သေးငယ်သောကလေး duds ထုပ်ပိုးခြင်း, လိုအပ်သောဆေးဝါးများပြင်ဆင်ကြ၏။ တချို့ကအကောင်းဆုံးကစားစရာဝယ်တစ်ပျူငှါနွေးထွေးသောနဲ့လှပတဲ့ပျိုးခင်းဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ။ ကိုယ်ဝန်၏အထွတ်အထိပ်မလွှဲမရှောင်ချဉ်းကပ်သည်, အရာခပ်သိမ်းအစအနများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချိန်အဆိုပါနီးကပ်လာသည်စိုးရိမ် mom, ။ ...
ကိုယ်ဝန်နှင့်မှားယွင်းသောစဉ်အတွင်းအစစ်အမှန်ကျုံ့ခွဲခြားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? nulliparous အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကျုံ့ Features Read more »
123 နောက်တစ်နေ့ →